सिल्टल: मोजाडा डाटा एक्सटेक्चर - उत्तम र भरोसेमंद उपकरण
मोजाडा एक व्यापक वेब स्क्रैपिंग सेवा हो; यो सर्वोत्तम यसको उपयोगी सुविधा र एक समय मा धेरै कार्यहरू गर्ने क्षमताको लागि जानिन्छ. यो सफ्टवेयरले तपाईंलाई Aliexpress बाट सामग्री स्क्रैप गर्न अनुमति दिन्छ. com, boohoo - suphera ? confiavel?. com, Amazon, and eBay. तपाइँ फाइलहरू ड्रॉपबक्स र Google ड्राइभमा सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईको हार्ड डिस्कमा डाउनलोड गर्नुहोस्.
मोजेडा कार्य कसरी गर्छ?
मोजांडाले निम्न कार्यहरू अनुसार यसको कार्यहरू गर्दछ:
1. यसले बहु साइटहरूबाट डेटा निकाल्छ. पहिलो, मोजाडाले डेटा ढाँचा पहिचान गर्दछ.
2. अर्को चरणमा, डाटासेटहरू मिलाउँछ.
3. तेस्रो, मोजाडाले दुई मुख्य क्लाउड स्टोरेज सेवाहरू परिणामहरू: ड्रॉपबक्स र AWS लाई अपलोड गर्दछ.
1. मोजेडा वेब कंसोल - यो वेब अनुप्रयोगले हामीलाई हाम्रो एजेन्टरहरू चलाउन अनुमति दिन्छ (स्क्रैप परियोजनाहरू). हामी परिणामहरू हेर्न र व्यवस्थित गर्न सक्छौं र हटाइएको डेटा CSV र JSON मा निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ.
2. एजेन्ट बिल्डर - यो एक विन्डोज अनुप्रयोग हो जुन एकै समयमा धेरै डाटा निष्कर्षण परियोजनाहरू निर्माण गर्न प्रयोग भएको थियो.
मोजाडा को अधिकांश विशेषताहरु:
1. सबै-मा-एक सफ्टवेयर:
Mozenda सर्वश्रेष्ठ यसको प्रयोगकर्ता-अनुकूल इन्टरफेस लागि जानिन्छ. यो केवल एक वेब एक्सचेंटर होइन तर एक क्रलर पनि होइन; यो सफ्टवेयर तपाईंको वेब पेज क्रल गर्न विभिन्न बिट प्रयोग गर्दछ. यसले कहिलेकाहीँ प्रतिबन्धित वेबसाइटहरूबाट डेटा निकाल्न सक्छ, र तपाइँसँग तुरुन्तै स्क्रैप गर्न URL लाई हाइलाइट गर्न आवश्यक छ. साथै, यो स्प्याम सुरक्षा प्रदान गर्दछ र तपाईंको सामग्रीमा सबै साना त्रुटिहरू फिक्स गर्दछ.
2. सानो आकारको कारोबारका लागि उपयुक्त:
एक स्टार्टअपको रूपमा, यो संभव छ कि तपाईले pricey डेटा स्क्रैपर्स वा वेब क्रलरहरू. यद्यपि, मोजाडा नि: शुल्क सफ्टवेयर हो जुन सुचारु चुनौतीपूर्ण कार्यहरू सजिलै गर्न सक्दछ. यसले वेब कागजातहरू विश्लेषण गर्छ, प्रतियोगिहरु, नवीनतम प्रवृतिहरू, उभरिएका बजारहरू, र तपाईँका मिनेटहरू मा केहि मिनेटमा चाहेको परिणाम प्राप्त गर्दछ।. मोजाडा फ्रीलान्सरहरू र साना-आकारको व्यवसायहरूको लागि राम्रो छ र तपाईंलाई कोडिङ वा प्रोग्रामिङ क्षमताहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छैन.
3. सम्पूर्ण वेबसाइट स्क्रैप गर्नुहोस्:
यदि तपाईं सम्पूर्ण वेबसाइट स्क्रैप गर्दै हुनुहुन्छ भने, मोजाडा तपाईंको लागि सही विकल्प हो. शोधकर्ताहरूले आफ्ना प्रयोगहरू सञ्चालन गर्न पत्रिकाहरू र ई-पुस्तकहरूबाट जानकारी पाउन आवश्यक छ. यो उपकरणले राम्रो तरिकाले गुणात्मक र मात्रात्मक डेटा एकत्रित गर्न मद्दत गर्दछ, र कम्पनीहरूले विभिन्न उत्पादन सुरु गर्न र बजार गर्न मोजाडा प्रयोग गर्न सक्छन्.
4. ब्रान्ड जागरूकताको लागि राम्रो:
यदि तपाईंले ब्रान्ड सुरु गर्नुभयो वा इन्टरनेटमा आफ्नो उत्पादन र सेवाहरू प्रवर्द्धन गर्न चाहानुहुन्छ, तपाई मोजिडा प्रयोग गर्नुपर्छ. यस डेटा स्क्रैपिंग सेवाको साथ, तपाईं सजिलै संग डेटा एकत्र गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न प्रयोगहरू सञ्चालन गर्न र तपाईंको कागजातहरूको गुणस्तर निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ।. साथै, यो उपकरणले बढि सुरागहरू उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ र तपाईंको सँधै प्रभावकारी र कुशलतापूर्वक सोशल मिडियामा ब्रान्डलाई प्रवर्द्धन गर्दछ. छोटोमा, तपाईं यो सफ्टवेयर प्रयोग गरेर आफ्नो व्यवसाय बढाउन सक्नुहुन्छ र विश्वभर संभावित सम्भावित ग्राहकहरू लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ.